Ogaden News Agency (ONA) – Danjireyaal Maraykan Ah oo Shaqadii Katagay, Ogow Sababta!
Danjireyaal Maraykan Ah oo Shaqadii Katagay, Ogow Sababta!
Posted by ONA Admin	/ June 30, 2018
Sida ay kusoo waramayaan ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay Danjiraha Maraykanka u fadhiya dalka Estonia James D Melville ayaa shaaciyay in uu xilkaas ka tagayo, taasna ay ugu wacantahay siyaasadaha Trump ee uu kula dhaqmayo adduunka intiisa kale, gaar ahaan Midoowga Yurub (EU) oo uu kusoo rogay canshuuro dheeraad ah.
Safiiro kale ayaa sidoo kale sheegay in aysan la shaqayn karin Trump, islamarkaasna aysan matali karin Maraykanka iyadoo uu Trump madaxweyne ka yahay, waxaana ka mid ah safiirkii Maraykanka ee Panama u fadhiyay John Feeley iyo Elizabeth Shackelford oo Soomaaliya u qaabilsanayd Maraykanka.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda Maraykanka ayaa xaqiijiyay in danjire Jim uu xilka ka tagayo 33 sano kadib oo uu xilka hayay. Trump ayaa dhaqangaliyay canshuuro dheeraad ah oo ka dhan badeecooyinka dalalka adduunka ay u dhoofiyaan Maraykanka.